Yekupedzisira purofiti Kuongorora Kuchengeta Yako Mari uye Mari
Features » Kuongorora purofiti
Sarudza nenzira kwayo mari uye mari, huwandu hwepundutso, uye purofiti chaiyo yakakamurwa pakati pemapati.
Varidzi vanowanzo kupa chikamu chemanagement emahotera avo ezororo kana anoshandirwa maturati eimba kukambani yekutarisira zvivakwa. Nekuita izvi, ivo vanotarisira kuve nekujeka kuzere kutenderedza mari dzine chekuita neyekushanya kwevaenzi uye mari inoenderana neiyo imba. Asi ndeipi nzira? Kazhinji, vazhinji vanobatanidzwa vanoshandisa Excel maspredishiti ekuunganidza uye kuburitsa ruzivo maererano nemari inowanikwa kubva mukubhuka. Ivo zvakare vanoshandisa aya mapepa kune chero epamhepo-anoenderana nemubhadharo mari, pamwe nezvimwe zvinodhura zvinoitwa panzvimbo yemuridzi. Ino inguva inopedza nguva uye inokanganisa kukanganisa, saka semuridzi wepfuma iwe unofanirwa kuisa simba rakawandisa uye nguva mukuita izvi. Zvakare, kushandisa mushandi pabasa iri kunodyawo muzasi-mutsara. Kazhinji, iwe unofanirwa kuzviita kamwe chete pamwedzi. Maitiro aya anosungirwa kutarisana nezvikanganiso uye kunyangwe vavariro dzakanaka dzinogona kugadzirwa kuve dzinotenderera nevaridzi kana vakaona kukanganisa kusingatarisirwe.
Panguva imwecheteyo, zvakakosha sezvazviri kune vanogamuchira kuti vanzwisise yavo yemwedzi-ne-mwedzi purofiti, nekuda kwebasa rakakura rinodiwa kuti riite izvi nenzira chaiyo munguva chaiyo, makambani mazhinji manejimendi epfuma anovimba nekuyerera kwemari sechiratidzo che purofiti. Aya mamiriro anogona kukonzeresa matambudziko mazhinji maererano nekutema mitengo. Nekuda kwekubhadharwa kunowanzo gashirwa muenzi asati aenda, izvi zvinopa pfungwa yekunyepa yekuita purofiti. Makambani achiona zvisirizvo mishumo yemubatsiro wavo anogona kuita sarudzo dzinogona kukonzeresa njodzi kubhizinesi ravo. Aya mamiriro anowanzo kutungamira Airbnb kubatira makambani kuwedzera nekukurumidza. Uye pakupedzisira, vanogona kusakwanisa kuvhara mari yavo pavanorova mwedzi usina kusimba. Izvi zvinokonzeresa kushushikana kukuru uye kudiwa kwekutarisazve zano nyowani mune tarisiro iwe ikozvino yaenderana nemishumo mitsva.
Zeevou's Profit Analysis Inogona Sei Kubatsira?
Isu tinofunga kuti Zeevou ine mhinduro yakanakisa yemhedzisiro yakanyatsoenderana nezve zvako purofiti nemari yaunoshandisa. Kambani yedu yakagadzira hurongwa hwepamberi hwekuverenga purofiti kune vese varidzi uye vanoita mari (varairidzi / varidzi vachishandisa mubati pamwe chete kubata zvinhu zvavo) kupa mvumo mari yavanogamuchira nekushandisa mukati mebhizimusi ravo rekuchengetedza pfuma. Mamaneja epfuma anogona kudoma, zvakadzama, kuti vabhadharise muridzi wega wega zvakadii Uye kuti kubhadharisa uku kuri pamberi pekutorerwa kwemitengo senge chiteshi makomisheni uye housekeeping.
Zvakare, ruzivo nezve chiteshi makomisheni rwunotorwa kubva Channels panowanikwa. Kune mamwe manyuko ekubhuka, Zeevou Hosts inogona kudoma kuti ndeipi nhanho yekomisheni mumiriri wega wega ari kuvachaja. Zeevou inofungawo nezve kadhi yekugadzirisa mari ye kadhi kubhadhara kana uchinge waita kumahombekombe kune wega kubhucha.
Kuverenga purofiti yevaenzi vanogara kwenguva yakareba kunogona zvakare kuve dambudziko. Zeevou anobvisa mutoro pafudzi rako achikupa mhinduro. Mari kubva kubhuku rega rega inozopatsanurwa nemwedzi zvichienderana nekuti husiku hwakawanda sei hunowira mumwedzi wega wega wekendari. Izvi zvinobvumidza purofiti kubva kubhucha kwenguva refu kana kubhuka kunoitisa inopfuura mwedzi mumwe kubva pamwedzi kuenda kune mumwe kuti iverengerwe nemazvo uye kwete kubiridzira manhamba zvakagadzirwa.
Zeevou's Profit Analysis inotarisawo purofiti inogadzirwa nekutengesa wedzera-wanda. Nokubvisa mutengo wekutengesa kubva pamutengo wekutenga kune chimwe nechimwe chigadzirwa kana sevhisi inotengeswa kune vashanyi unogona kuve nekucherechedza kwakajeka uye kunzwisisa kweiyi purofiti. Marinhi akagadzirwa kubva kune ekuwedzera-ons uye bookings akagoverwa kune iye anotambira uye investor. Chero mari logged muhurongwa inodhonzwa kubva kune inoenderana bato, ichibvumira iyo chaiyo purofiti yemugadziri uye muridzi wemari kuverengerwa.
Mauto anogona kuwana mhedziso yekuita kwemwedzi wavo. Iwe unozogona kuita izvi nekutumira kunze mushumo, zvakananga kubva kuZeevou, zvebatsiro pachibvumirano chimwe nechimwe, nepo varimi vachikwanisa kuona purofiti kubva kune zvavo zvese zvivakwa. Iyi purofiti ichave ichiwanikwa mune yakasarudzika mushumo mu muridzi portal. Iwe unogona kusarudza kuratidza kana kuvanza ruzivo rwevaenzi kune wega muridzi. Izvi zvinobvumira varidzi kuti vape sevhisi yakazara yakajeka, uye kuti vagone kukwidziridza mibairo yavo pachavo nevatengi vavo.
Uchishandisa chinhu chitsva chaZeevou chinonzi Profit Analysis, unogona kugadzirisa zviri nyore kunetsekana kwekutarisira nekuronga zvaunoshandisa uye purofiti. Zervou akagadzirwa kuti akubatsire, semuridzi wepfuma, kuti uwane mhinduro iri nyore kudambudziko rako. Kuongorora kwePurofiti kunokutendera iwe kuti ugovane zvirinani zviwanikwa senge nguva, mari nesimba rekugadzirisa neichi chikamu chemabhuku ako.
Kana iri nyaya yaunoda kumbira demo, uye ngatikuratidzei maitiro ekuvaka yako yakananga kubhuka webhusaiti uye unakirwe neyedu yakawanda mamwe zvinhu.